Ngingenza yini lula ukwenza inqubo yokwakha i-backlink esebenzisa iskripthi se-backlink?
Wake wazibuza ukuthi uzothola kanjani izinkomba zangemva kwekhwalithi ezintsha kusuka ezithombeni? Kuyindlela yokwakha yokuxhumanisa abaningi be-webmasters abangazi noma bamane bengazi amandla ayo. Nokho, empeleni, isithombe esisodwa se-intanethi singaba nezixhumanisi eziyinkulungwane. Ukugxila ekwakhiweni kwesixhumanisi esekelwe ematheksthini kungakwenza ungaphuthelwa ngamasu amasu wokwakha amanethonya kakhulu - isakhiwo sokuxhumanisa isithombe. Ungathumela ulwazi oluningi oluwusizo ngokusebenzisa okuqukethwe okubukwayo njenge-infographics, amavidiyo, izithombe, njalonjalo.
Ake sihlolisise amanye amasu wokwakha izixhumanisi azokusiza ukudala izixhumanisi ezivela ezithombeni.
Indlela yokudala izithombe ezithinta imoto ne-backlink?
Okokuqala, ngingathanda ukusho ngokubaluleka kwempahla ebonakalayo - hiina rehvide müük. Izimpahla ezibonakalayo zinamandla amaningi kunamagama afanayo anezithombe. Uma zenziwe kahle, zinikeza ubuciko, ukucaca, noma ulwazi olusha esihlokweni esithandayo.
Ukuheha ithrafikhi kumthombo wakho wewebhu, udinga ukudala amafa okuphoqelela abonayo ngama-slogans abamba. Abasebenzisi bavame ukwabelana ngamazwi amanga, amahlaya, kanye nama-memes. Noma kunjalo, uma ungewona umklami, kungase kube nzima ukuthi ubeke zonke izinto ndawonye. Noma kunjalo, kukhona njalo indlela yokuphuma. Ungasebenzisa amasevisi ashibhile afana ne-Fiverr ukwakha isithombe esilula. Ngaphezu kwalokho, ungathola ama-gigs awo ahlukahlukene. Bazovuma ukwakha amahlaya alula echasheni lakho lokuqukethwe ngenani elilinganayo esikhathini esifushane. Kodwa-ke, uma udinga okuthile okuyinkimbinkimbi, okudinga indlela yokusebenza, ngakho-ke kudingeka uqashe ukukwakhiwa kwendlu.
Kunzima ukusho ukuthi lesi sithombe sizoheha yini ithrafikhi eningi kokuqukethwe kwakho noma cha, kodwa ngokuqinisekile kuzosiza ukuqonda umqondo ngemuva kwalesi sihloko.
Ukuthengiswa kwe-infographic kuyasebenza kanjani?
I-Infographic ingalo ezingamandla zokuthola i-backlinks. Abaphathi beWebhu basebenzise ukuvuma abafundi futhi bawenze baqotho kulo mkhiqizo. Amabhizinisi amancane ngokuvamile afaka ama-infographics kokuqukethwe kwawo ukuze athole izixhumanisi ezingenayo kusukela kubadlali bezimakethe eziphezulu.
Okokuqala, udinga ukwenza ucwaningo lwe-Google ukuthola izibalo ezihlobene nezimboni. Sebenzisa imibuzo elandelayo ukuthola okuqukethwe okulungile - "igama elingukhiye" + "infographic"; "Igama eliyinhloko elingukhiye" "; "Igama elingukhiye le-infographics. "Bese ubheka ngemiphumela etholakalayo bese uthola okungcono kakhulu.
Uma ibhizinisi lakho lifakwa endaweni ethile engavamile, ungasebenzisa ezinye izinkomba zithombe lapho ungathola khona konke. Enye yezinkomba eziyaziwa kakhulu zibukwayo. ly and Pinterest.
Uma nje usutholile isithombe esifanele, uzodinga ukuthola isihloko esisebenzela kangcono niche yakho. Ukusebenzisa amapulatifomu okukhulunywe ngenhla, ungakwazi ukuhlunga ama-duds futhi uthole umqondo wokuthi yiziphi izinhlobo ze-infographics ezivame ukuduma.
Esigabeni esilandelayo, udinga ukuthola idatha yakho ndawonye. Njengoba umgomo wakho oyinhloko ukuthola i-infographic yakho emithonjeni eminingi ehlobene niche yewebhu, udinga ukuqoqa ulwazi lwakho ngokucophelela. Futhi ngaphandle kokuthi idatha yakho ihlaba umxhwele, cishe ngeke ithunyelwe ku-Forbes noma ku-Harvard. edu. Noma kunjalo, ingaxhunyaniswa kalula nemithombo yewebhu ehloniphekile embonini yakho.